Jereo ny Adobe Add-ons: The Resource Library | Famoronana an-tserasera
Jereo ny Adobe Add-ons: The Resource Library
Jose Angel | | Fitaovana famolavolana, borosy, dia midika hoe
Toy ny mahazatra dia manokatra fonosana Adobe izahay mba hiasa amin'ny endriny miaraka amin'ny fahatokisan-tena hahavita ilay asa. Ary toy ny mahazatra dia tsy afaka mahazo ilay tetikasa tadiavintsika isika. Tena ara-dalàna izany, satria tsy manana ny zavatra rehetra ao an-dohanay amin'ny endrika fitaovana isika.
Nandritra ny androm-piainan'ny Creativos dia nahita fotoana an'arivony maro izahay hisintona sy hividy loharano. Saingy mbola tsy tonga tany amin'ny toerana akaiky an'ity iray ity izahay. Adobe Add-ons dia tranomboky loharanon-karena ho an'ny suite Adobe manontolo.
1 Harena saika tsy misy fetra
2 Windows sy Mac
Harena saika tsy misy fetra
Misy loharano isan-karazany. Manomboka amin'ny plugins ka hatramin'ny borosy amin'ny alàlan'ny sivana isan-karazany. Karama, maimaim-poana… misy ny zava-drehetra. Mazava ho azy, soraty izany, tsy maintsy voasoratra anarana ianao hahafahanao manararaotra ireo fotoana ireo araka ny lojika. Azonao atao ny manafatra azy na izany aza, te hahita izay tianao indrindra ianao na raha fantatrao ilay anarana dia azonao atao ny mitady azy io ary mandeha mahitsy amin'ny teboka.
Windows sy Mac
Ho anao rehetra manontany tena momba ny mifanentana amin'ireo karazana rafitra fiasa isan-karazany, eny, misy izy roa. Misy karazana loharanom-pahalalana maro izay mifanaraka amin'ny rafitra miasa sy ny hafa izay tsy. Alohan'ny handehananao misintona dia alao antoka fa mbola tsy zatra ilay hevitra anananao ianao.
Alohan'ny hisintomana anao dia azonao atao koa ny mijery ny hevitr'ireo mpampiasa efa nividy ireo vokatra ireo, hahazoana antoka fa mandeha tsara na inona olana na fetrany mety hihaona aminao rehefa mampiasa azy io.
Araka ny nolazaiko hatrany, mba hanampiana ny vondrom-piarahamonina misy Adobe sy fitaovana hafa ampiasanao isan'andro, ny fampiasana ity karazana tombony maimaimpoana ity amin'ny ankapobeny, dia tokony hanorisory antsika vetivety ary hamela ny fijerintsika manokana ho an'ny rehetra ireo izay ao aoriana.
Misoratra anarana ary jereo ny vaovao rehetra entiny ary raha tianao izany dia omeo hevitra ireo mpampiasa vaovao rehetra te hiditra amin'ity traikefa nahafinaritra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Jereo ny Adobe Add-ons: The Resource Library
Ny fomba fifangaroan'ny graffiti dia zorony